दक्षिण कोरियामा को’रोना संक्र’मितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो ! - Thulo khabar
दक्षिण कोरियामा को’रोना संक्र’मितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो !
काठमाडौं : दक्षिण कोरियामा को’रोना भा’इरसको स’ङ्क्रमण फेरि ह्वात्तै बढेको छ। कोरिया रोग निय’न्त्रण तथा रोक’थाम विभागका अनुसार नयाँ स’ङ्क्र’मितको सङ्ख्या तीन हजार २७३ पुगेको छ।
योसँगै कोरियामा दैनिक स’ङ्क्र’मितको सङ्ख्या पहिलो पटक तीन हजार नाघेको छ। कोरियामा गत सोमबारदेखि कोरियन दसैँ (छुसक) को तीनदिने बिदा थियो । यो बेला मानिसको अत्यधिक चहलपहल भयो।
त्यसैले पनि यो अवस्था आएको अनुमान गरिएको छ। सरकारले उक्त समयमा सामाजिक दूरीको नियमलाई समेत हल्का खुकुलो बनाएको थियो । बिदाका अवसरमा लाखौँ मानिस आफ्नो कार्यस्थलबाट घर फर्किएकाले स’ङ्क्र’मितको सङ्ख्या बढेको हो।
स’ङ्क्र’मणकै कारण कोरो’ना परीक्ष’ण गर्नेको लाइन पनि लामो हुने गरेको छ। नयाँ थपिएका कूल स’ङ्क्र’मितमध्ये तीन हजार २४५ स्थानीय हुन् भने बाँकी बाहिरबाट स’ङ्क्र’मित भएर आएका हुन् । को’रोना स’ङ्क्र’मितको सङ्ख्या बढ्ने’क्रमसँगै सरकारले खो’प कार्यक्रमलाई पनि ती’व्र
गतिमा अगाडि बढाएको छ। हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा धेरैले पहिलो मात्राको खो’प लगाइसकेका छन् भने दुवै मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या ४२ प्रतिशत नाघेको छ। सरकारले दुई मात्राबीचको समयावधिलाई समेत छो’ट्याउ’नाका साथै दोस्रो मात्राको कार्यक्रमलाई समेत ती’व्र पार्ने बनाएको छ ।